Semalt: Kunze kweRigor Monitoring Stations Kubva kuWeb Analytics
Nik Chaykovskiy, Mutungamiriri Mukuru weVatengi Vekubudirira Semalt , anoti kushandisa Real Browser Checks inzira yakanakisisa yekuona webhutani yekuita uye kutarisira mutengo wevashandi. Rigor ikambani inobatsira nechekuongorora uku nekuita kuti inotarisa webhusaiti yekambani mumushanduri chaiyo. Chikonzero nei Rigor akaita izvi kuti aone kuti nguva yakawanda peji inotora kudii pakushandura kwevashandisi. Inosanganisirawo mapepa evanhu vatatu-kufanana nehuwandu hwevanhu, data feeds, ad network, analytics, uye CDNs.
Vafambisi webhutori vanofanirawo kutora zvikonzero zvinowanzokonzera zvishoma zvinotakura peji. Kunze kwehutachiona nemarware, Trojans, uye mavairasi, zvikamu zvitatu zvepakati zvinogona kutungamirira pakuderera zvishoma - slot machine online gratis sphinx. Vanowedzera kukosha panzvimbo yepaiti, asi kune webhusaiti inotungamirirwa nehutano, inofanira kutarisa kune idzi dzakatemerwa. Kutsvakurudza kwakaratidza kuti izvi zvechitatu zvepakati zvinogona kunonoka kuzadza peji-full kusvika kweminiti. Zvakakosha kugovera zvimwe zvemasangano anouya pamwechete nezvimwe zvikamu. Kunyange zvakadaro, vanouya pamutengo, uye zviri kumwene kuti atarise avo vanobatanidzwa panzvimbo yacho uye izvo zvisipo. Nzira yakanakisisa yekuita izvi nenzira yakajeka ndeyekuita mari yekubhadharisa-chengetedza pazvinhu zvose zvechitatu.
Sezvo Rigor akatora zvose zviri mukati pe peji pazvikamu zvose zvekutsvaga webhusaiti, mumwe achange achida kubvisa zvose motokari inokonzerwa nezvivako zvekuongorora. Kana zvisina kudaro, inogona kutungamira kuGoogle Analytics kuisa mhinduro dzakagadziriswa. Pane nzira inotevera kutevera kuve nechokwadi chokuti mushandisi anongobvisa zvose zvese kubva kunzvimbo dzekuongorora. Inonyanya kufanirwa kuongorora shanduro yakashandiswa pane iyi iGoogle Analytics..
Matanho anoshandiswa muGoogle Analytics ari pasi rose. Zvinoreva kuti hazvina basa kuti chidzidzo chipi chinoshandiswa chinoshandiswa, mutungamiri akafanana kune vose. Nokuda kwechikamu ichi, ticharatidza izvi kushandisa shanduro yeGoogle Analytics, iyo inowanzoonekwa kune mamwe mawebsite.
Hezvino izvo munhu anofanira kuita:
Pinda kuGoogle Analytics software
Pakuzarura, tsvaga Admin Admin tab, iyo inokutakure urongwa hwemaprofaili aunosarudza.
Sarudza mufananidzo wakakodzera. Muchiitiko ichi, Rigor yaizova sarudzo yakanakisisa.
Tsvaga pa Zvinyorwa zvitsva kubva pakusarudzwa kwakapiwa
Sarudza + Mutsva wekutsvaga kuti uite tsika yechirongwa chesaiti.
Pakusvika parizvino, munhu angafanira kutarisana nezvenzvimbo dzekuongorora nzvimbo iyo Rigor iye zvino inzvimbo. Vanopa ruzivo rwakakwana rweRigor nzvimbo nevanotarisira nzvimbo dzavo, ne IP address, region code, uye basa rakapiwa. Kamwe kujekeswa kwekombikiti yePI kwapera, dzokera kuGoogle Analytics kuti upedze tsika dzacho.
Pasi pemufananidzo mutsva, enda kune "Add Filter to Profile."
Tarisa bhokisi iri nekukumbira kukumbira kana kuumba firiji itsva.
Muchirongwa chemufaira, zita refaira rinofanira kusanganisira nzvimbo yekuchengetera nzvimbo, chengetedza predefined filtriti mumutambo wechirwere. Pinda maIndaneti yeIndaneti yekutsvaga zvitsva.
Hapana chikonzero chekusabvisa zvivako zvepakati kana zvigadzirisiti sezvo zvisingaratidzike muhurukuro yakawanda. Mushure mezvose, izvi zvakakwana, zvose zvinotakura kubva panzvimbo dzekutarisa hazvionekwi mumishumo.